बादल कसरी लुप्त हुन्छ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
बादल कसरी लुप्त हुन्छ?
को विकास बादलहरू यो ढिलो छ, स्पष्ट रूपमा, जब तिनीहरूलाई प्रक्रिया गर्ने ठाउँ तिनीहरू रोकिन्छ। तर अन्य कारकहरू हस्तक्षेप गर्न सक्छन् बेपत्ताहरूका कारण वाटर हीटिंग, वर्षा र ड्रायर वरपरको हावाको साथ मिसि clouds जस्ता बादलबाट पानीको थोपाहरू वा बरफ क्रिस्टलहरूबाट।
सौर्य वा स्थलीय विकिरणको अवशोषणले बादललाई तताउन सकिन्छ, तर दुबै घटनाहरू तुलनात्मक रूपमा कमजोर छन् adiabatic हीटिंग.
यो के हुन सक्दछ यदि क्लाउड अवस्थित हवा हावामा सरेको छ भने। हावाको तापक्रम बढ्दै जाँदा, यसको सापेक्ष आर्द्रता खसालिन्छ र हावा संतृप्त हुन सक्छ; त्यसो भए क्लाउड कणहरू वाष्पीकरण हुन जान्छ अदृश्य पानी बाफ.
La सनस्ट्रोक यसले प्रायः गडबडी द्वारा सिर्जना बादलहरूको अपव्ययताको कारण गर्दछ। यदि पर्याप्त सौर्य विकिरण भुइँमा छिर्छ भने, सतहको नजिकको हावालाई तताउँदै, मिश्रणको घनीकरणको स्तर बढ्दछ र यसैले स्ट्र्याटस वा स्ट्र्याटोकुमुलसको आधार पनि माथि उठ्छ। त्यसो भए, टर्बुलन्सको उल्टाउँदै सीमित बादलको मोटाई घट्छ र अन्ततः बादल पूर्ण रूपमा हराउँछ।
को राम्रो मौसम cumulus, जो पृथकको प्रभावको अधीनमा रहेको भूमिमा गठन गरिन्छ, एक दैनन्दिन घटना हो। ती सामान्यतया बिहान देखा पर्छन्, दिउँसोको अवधिमा उनीहरूको अधिकतम विकासमा पुग्छन् र दिनको अन्त्यमा माटो फेरि चिसो हुँदा चाँडै हराउँछन्।
बादलको वरपरको हावा प्राय: असंतृप्त हुन्छ। यस हावाको साथ क्लाउडको मिश्रणले गर्दा सान्दर्भिक आर्द्रतालाई १००% तल तल दिन्छ र केही उत्पादन गर्दछ वाष्पीकरण क्लाउडमा, जुन एरोड हुन्छ र खेर जान्छ।
थप जानकारी - आरएच, 'बिभिन्न महिमा' बादल, प्रभावशाली मौसमविद् घटना
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » बादल » बादल कसरी लुप्त हुन्छ?
दुबई मा Sandstorms